सुत्नु अघि भाग्यमानीलेमात्र देख्ने दुर्लभ नाग देवतालाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्दै हेर्नुहोस् तपाईंको भाग्य र भविश्य । – " Smart Khabar "
सुत्नु अघि भाग्यमानीलेमात्र देख्ने दुर्लभ नाग देवतालाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्दै हेर्नुहोस् तपाईंको भाग्य र भविश्य ।
सुत्नु अघि भाग्यमानीलेमात्र देख्ने दुर्लभ जीउँदो दाहिने शंखलाई बेवास्ता नगरी दर्शन स्वरूप एक सेयर गर्दै हेर्नुहोस् तपाईंको भाग्य र भविश्य ।
सुरुवातमा मन प्रफुल्ल रहने छ र आत्मबल बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग र हौसला प्राप्त हुने छ । घरपरिवारबाट भरमग्दुर सहयोग प्राप्त हुने छ । बन्दव्यापारमा राम्रै देखिन्छ, तर ढिलो गरी कार्यसम्पादन हुने सम्भावना छ । साथीभाइ र समाजले तपाईंको भावनालाई ढिलो गरी बुझ्ने छन् । तर अपराह्नमा आठौं घरमा चन्द्रमा पुग्ने भएकाले के गर्ने के नगर्ने भन्ने बेचैनी हुनसक्छ । स्वास्थ्यमा सामान्य कमजोरी भएको अनुभूति हुनेछ । मन भावना र कल्पनामा रुमल्लिन सक्छ ।
राम्रोरनराम्रो दुबैखाले समाचार सुन्न पाउनु हुनेछ । यात्राको सम्भावना छ । बिहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिइने छ । खर्च बढे पनि घरायसी सुखसुविधाका सामाग्रीको जोहो हुनेछ । बन्दव्यापारमा लाभै हुनेछ । प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउने छ । बेलुका चौथो घरमा चन्द्रमा जाने भएकाले घरायसी समस्याहरू देखापर्न सक्छन् । पतिपत्नी वा प्रेमीरप्रेमिकाका बीचमा मनोमालिन्य हुनसक्छ । मातापिता वा परिवारको ज्येष्ठ सदस्यको स्वास्थ्य चिन्ताको विषय बन्नसक्छ, तर डराउनु पर्दैन ।
व्यय क्षेत्रमा चन्द्रमा रहेकाले सुरुमा मन खिन्न भए पनि अपराह्नपछि मन भुलाउने उपायको खोजी हुनेछ । शत्रु परास्त हुनेछन् । इष्टमित्रले पनि तपाईंको प्रशंसा गर्नेछन् । परोपकारका क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने छ । आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट बेफाइदा हुनेछैन । बन्दव्यापारमा फाइदा नै देखिन्छ । मनमा देखिएका निराशा र खिन्नताको समाप्ति हुनेछ । दुःखसुख, आयव्यय, सफलता–असफलता उस्तैउस्तै होला । सोचे अनुसार विभिन्न ठाउँको यात्रा पनि हुनसक्छ । नयाँ व्यापार वा व्यवसायतर्फ मन आकर्षित हुनेछ । आफूले ताकेअनुरूप तुरुन्त काम नबने पनि अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्नु हुनेछ ।
माताको दर्शन गरी ०७६ असोज ३० गते बिहिवारको राशिफल हेर्नुहोस्,यी ३ राशिलाई आज सुभ छ !
पाथिभरा देवी को दर्शन गरि भोलि बिहिबार को राशिफल हेर्नुहोला, भेटी स्वरुप एक सेयर गरौ !
०७६ असोज २९ गते बुधबार ई. स. २०१९ अक्टोबर १६ तारिख, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
बागलुङ कालिका मन्दिरको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नुहोस्…